Nrụpụta Ihe Ahịa Digital / Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
AJESJES / Ajụjụ
MGBE AHVROP AH .R.
Kedu uru nke ịrụ ọrụ na Protolabs? Kedu ihe kpatara m ga - eji họrọ ụlọ ọrụ gị iji mepụta akụkụ m?
Anyị ulo oru 3D ebi akwụkwọ, CNC machining, mpempe akwụkwọ metal ationgha, na injection ịkpụzi ọrụ na-enye akụkụ mere kpọmkwem site ahịa si 3D CAD nlereanya, na-ebelata ihe gbasara nke omume nke njehie. Proprietary software automates toolpath ọgbọ ibelata n'ichepụta oge ma belata akwụ ụgwọ.
Kedu ụlọ ọrụ ị na-arụ ọrụ?
N'ihi na nke proprietary na asọmpi ọdịdị nke oru anyị na-arụ ọrụ na, anyị adịghị igosipụta a ndepụta nke ndị ahịa anyị. Agbanyeghị, anyị na-anata ikike oge niile ịkekọrịta akụkọ ọma ndị ahịa. Gụọ akụkọ ọma anyị ebe a.
Achọrọ Nkwekọrịta Na-enweghị Ngosipụta (NDA) ka ọ na-azụ ahịa na CreateProto?
Ndi NDA adịghị mkpa iji azụmahịa na azụmahịa azụmahịa. Mgbe ị na-ebugote ụdị CAD gị na saịtị anyị, anyị na-eji izo ya ezo nke ihe ọ bụla ị bugoro na-echebe site na ọrụ nzuzo. Maka ama ndị ọzọ, kpọtụrụ onye na-ahụ maka akaụntụ gị.
Gịnị ụlọ ọrụ na-eji MepụtaProto ọrụ?
Anyị na-arụ ọrụ dị iche iche gụnyere ngwaọrụ ahụike, akụrụngwa, ọkụ, ikuku, teknụzụ, ngwaahịa ndị ahịa, na elektrọnik.
Kedu mgbe m kwesiri iji ịkpụzi ihe na ịkpụzi ọgwụ?
Tupu ịmalite itinye ego iji nweta ọgwụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ma ọ bụ usoro arụmọrụ dị elu, o yikarịrị ka ị ga-achọ ịnwale akụkụ nke dị nso na akụkụ mmepụta dị ka o kwere mee. CNC machining bụ nhọrọ kachasị mma maka ọnọdụ a.
Tụkwasị na nke a, ndị injinia na-achọkarị nanị otu ma ọ bụ ma eleghị anya akụkụ ole na ole maka ihe ndozi ule, mgbatị mgbakọ, ma ọ bụ usoro mgbakọ. Machining bụ nhọrọ kachasị mma ebe a, mana ụlọ ahịa igwe ọdịnala na-akwụkarị ụgwọ dị egwu na-anaghị agagharị (NRE) maka mmemme na ndozi. Nkwụ ụgwọ NRE a na-emekarị ka ị nweta obere ọnụọgụ ego. Usoro akụrụngwa CNC na-akpaghị aka na-ewepụ ụgwọ NRE na-ebute n'ihu ma nwee ike ịnye ọnụọgụ dị ka otu akụkụ na ọnụ ọnụ ọnụ ma nweta akụkụ n'aka gị ngwa ngwa dị ka ụbọchị 1.
Ọgwụ na ịkpụzi ka mma ruru eru na-akwado ibu ichekwa samples maka ọtọ ma ọ bụ ahịa ule, akwa tooling, ma ọ bụ ala-olu mmepụta. Ọ bụrụ na ịchọrọ akụkụ tupu emee igwe eji eme nchara (ihe dị ka izu 6 ruo 10 na ndị ọzọ na-akpụzi) ma ọ bụ ihe olu gị chọrọ ka ọ ghara ịkọwapụta ngwa ọrụ mmepụta ihe dị oke ọnụ, anyị nwere ike ịnye akụkụ nrụpụta iji mezuo ihe niile ị chọrọ (ruo akụkụ 10,000 + ) n'ime ụbọchị 1 ruo 15.
Igwe ole ka inwere?
Anyị nwere ihe karịrị igwe 1,00 ugbu a, lathes, ndị na-ebi akwụkwọ 3D, ígwè obibi akwụkwọ, igwe brek na ngwa ọrụ ndị ọzọ. Site na ogologo oge nke uto, ọnụ ọgụgụ a na-agbanwe mgbe niile.
Kedu ihe kpatara ị ji nwee ụlọ ọrụ nrụpụta na mba ndị ọzọ?
Anyị na-arụpụta akụkụ niile maka North America na mba Europe niile na ụlọ ọrụ China anyị. Anyị na-ebupụtakwa mba ọzọ n'ọtụtụ mba ndị ọzọ site na ụlọ ọrụ China anyị.
Kedu ka m ga-esi nweta ego?
Iji nweta ọnụego maka ọrụ anyị niile, bulite ụdị 3D CAD na saịtị anyị. You'll ga-enweta nkwukọrịta mmekọrịta n'ime awa ole na ole iji nweta nzaghachi imewe efu. Ọ bụrụ na enwere mpaghara nsogbu na ntinye aka, igwe anyị na-ekwu okwu na-enye nkọwa zuru ezu banyere nsogbu nrụpụta nwere ma na-atụ aro ngwọta ga-ekwe omume.
Enwere m ike iwepụta akụkụ m na ọrụ niile otu oge?
Nwere ike nweta ọnụego maka ịkpụzi ọgwụ na ịkpụzi ya, mana ọ ga-adị mkpa ịrịọ nke abụọ maka mbipụta 3D.
Kedu ụdị faịlụ ị na-anabata?
Anyị nwere ike ịnabata ụmụ amaala SolidWorks (.sldprt) ma ọ bụ ProE (.prt) yana ụdị 3D CAD siri ike sitere na usoro CAD ndị ọzọ na-emepụta na IGES (.igs), STEP (.stp), ACIS (.sat) ma ọ bụ Parasolid (. x_t ma ọ bụ .x_b) usoro. Anyị nwekwara ike ịnabata faịlụ .stl. A naghị anabata eserese abụọ (2D).
Enweghị m ụdị 3D CAD. Nwere ike ịmepụta otu maka m?
Anyị anaghị enye ọrụ nhazi ọ bụla n'oge a. Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka iji mepụta usoro 3D CAD nke echiche gị, kpọtụrụ anyị site na email ma anyị ga-enweta gị ozi kọntaktị maka ndị na-emepụta ihe maara usoro anyị.
Protolabs na-enye nhọrọ ịmecha na usoro nke abụọ yana ọrụ ya?
Enwekwukwa gụchara nhọrọ na sekọndrị Filiks dị maka 3D ebi akwụkwọ, mpempe akwụkwọ metal, na injection ịkpụzi Filiks. Anyị na-adịghị na-enye nsoje Filiks maka CNC machining n'oge a.
You na-enye ọrụ nyocha nke mbụ (FAI)?
Anyị na-enye FAI na akụkụ ndị akpụzi na nke akpụzi.
Kedu otu mbipụta 3D si dị iche na CreateProto?
Ihe niile anyị na - eme na CreateProto a na-elekwasị anya n’inye ihe ngosipụta kachasị elu na nke kachasị elu na akụkụ mmepụta na ụlọ ọrụ ahụ. Nke a chọrọ teknụzụ kachasị ọhụrụ, nke njikwa njikwa jikwaa. Anyị ulo oru-ọkwa 3D ebi akwụkwọ akụrụngwa bụ ala-nke na-art na rigorously nọgidere na-enwe ịrụ dị ka ọhụrụ na bụla Mee. Na-achịkwa ya niile, ndị ọrụ anyị a zụrụ azụ na-ewepụta akụkụ gị dị ka usoro ndị ejiri nlezianya mee.
Kedu ihe bụ stereolithography?
Ọ bụ ezie na stereolithography (SL) bụ nke kachasị ochie na teknụzụ mbipụta 3D niile, ọ ka bụ ụkpụrụ ọla edo maka izi ezi zuru oke, njedebe elu, na mkpebi. Ọ na-eji ihe ultraviolet laser elekwasị anya na obere ihe, na-ese n'elu mmiri resin thermoset. Ebe ọ dọtara, mmiri mmiri na-atụgharị na siri ike. A na-eme nke a ugboro ugboro n'akụkụ obe, akụkụ abụọ nwere akụkụ abụọ wee jupụta akụkụ atọ nwere akụkụ dị mgbagwoju anya. Njirimara ihe onwunwe dịkarịsịrị nke ndị na-ahọrọ laser sintering (SLS), mana ngwụcha na nkọwapụta enweghị nha.
Gịnị bụ nhọrọ laser sintering?
Nhọrọ laser na-ahọrọ (SLS) na-eji laser CO2 nke na-adọta n'àkwà ọkụ nke thermoplastic ntụ ntụ. N'ebe ọ na-adọta, ọ na-agbanye ọkụ na ntụ. Mgbe ọ bụla oyi akwa, a roller lays a ọhụrụ oyi akwa nke ntụ ntụ n'elu akwa na usoro akuko. Ebe ọ bụ na SLS na-eji thermoplastics injinịa eme ihe, akụkụ 3D ndị e biri ebi na-egosipụta oke ike.
Gịnị bụ PolyJet?
PolyJet na-arụ ọtụtụ ụdị ihe eji eme ihe na-agbanwe agbanwe na akụkụ ndị nwere mgbagwoju anya na geometries dị mgbagwoju anya. Ọtụtụ ihe isi ike (durometers) dị, nke na-arụ ọrụ nke ọma maka akụrụngwa nwere njirimara elastomeric dịka gaskets, akàrà, na ụlọ. PolyJet na-eji usoro jetting ebe obere ụmụ irighiri mmiri nke fotopolymer mmiri na-esi n'ụgbọelu dị iche iche na-agbasa site na ọtụtụ jets na n'elu ikpo okwu ma gwọọ oyi akwa site na oyi akwa. Mgbe ewu ahụ, a na-eji aka wepụ ihe nkwado. Akụkụ ahụ adịla njikere iji ya na-enweghị mkpa ọgwụgwọ.
Gịnị bụ kpọmkwem metal laser sintering?
Direct metal laser sintering (DMLS) na-eji eriri laser usoro na-adọta n'elu a nke atomized metal ntụ ntụ, ịgbado ọkụ na ntụ ntụ n'ime a siri ike. Mgbe oyi akwa ọ bụla gasịrị, agụba akụkọ na-agbakwunye ntụ ntụ ọhụrụ ma kwughachi usoro ahụ ruo mgbe e guzobere akụkụ ọla ikpeazụ. DMLS nwere ike iji ọtụtụ alloys, na-enye ohere ka akụkụ rụọ ọrụ ngwaike nke sitere na otu ihe ahụ dị ka ihe mepụta. Ebe ọ bụ na a na-ewu ihe ndị ahụ site na oyi akwa, ọ ga-ekwe omume ịmepụta atụmatụ na amaokwu dị n'ime nke na-enweghị ike ịtụ ma ọ bụ rụọ ọrụ ọzọ.
Kedu otu akụkụ DMLS dị?
Akụkụ DMLS bụ 97% ok.
N'ihi na nke proprietary na asọmpi ọdịdị nke oru anyị na-arụ ọrụ na, anyị adịghị igosipụta a ndepụta nke ndị ahịa anyị. Agbanyeghị, anyị na-anata ikike oge niile ịkekọrịta akụkọ ọma ndị ahịa. Gụọ ọmụmụ ihe ebe a.
Anyị anaghị enye ọrụ nhazi ọ bụla n'oge a. Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka iji mepụta usoro 3D CAD nke echiche gị, kpọtụrụ anyị site na email ma anyị ga-enye gị ozi kọntaktị maka ụlọ ọrụ imepụta nke maara usoro anyị.
Kedu ego nkịtị nke akụkụ 3D ebipụtara na CreateProto?
Ọnụahịa na-amalite gburugburu $ 95, mana ụzọ kachasị mma bụ iji nyefee ụdị 3D CAD iji nweta nkwupụta mmekọrịta.
Gịnị bụ ikeProto 'CNC machining ike?
Anyị na-egwe ọka ma gbanwee obere akụkụ nke ngwa ngwa. Ahụkarị ọtụtụ bụ otu 200 iberibe na n'ichepụta ụfọdụ bụ 1 3 ụbọchị azụmahịa. Anyị na-enye ndị mmepe ngwaahịa akụkụ nke akụrụngwa site na injinịa-akara ihe ndị kwesịrị ekwesị maka ịnwale arụmọrụ ma ọ bụ ngwa ojiji.
Kedu ihe pụrụ iche gbasara usoro CreateProto?
Usoro anyị kwuru na-enweghị atụ na ụlọ ọrụ igwe. Anyị emepeela sọftụwia na - ekwu okwu ngwanrọ na - arụ ọrụ nnukwu ụyọkọ ụyọkọ ma na - ewepụta ihe eji arụ ọrụ CNC chọrọ iji rụọ ọrụ akụkụ gị. Nsonaazụ bụ ngwa ngwa, adaba, ma dịkwa mfe iji nweta nkwupụta ma nyezie akụkụ ndị ọrụ.
Kedu ego nkịtị nke akụkụ ọrụ igwe na CreateProto?
Ọnụahịa na-amalite na $ 65, mana ụzọ kachasị mma iji chọpụta bụ itinye ụdị 3D CAD ma nweta nkwupụta mmekọrịta ProtoQuote. N'ihi na anyị na-eji ngwanrọ akụrụngwa na usoro ndozi akpaghị aka, enweghị ụgwọ ọ bụla na-abụghị nrụpụta injinia (NRE). Nke a na-eme ka ịzụta ihe dị ọnụ ala dị ka 1 ruo 200 akụkụ dị irè. Ahịa ma e jiri ya tụnyere mbipụta 3D dị ka nke dịtụ elu, mana ịkpụzi igwe na-enye ezigbo akụrụngwa akụrụngwa na ebupụta.
Kedu otu usoro usoro usoro si arụ ọrụ?
Ozugbo ị bugoro ụdị 3D CAD gị na weebụsaịtị anyị, sọftụwia ahụ na-agbakọ ọnụahịa iji mepụta imewe gị na ihe dị iche iche wee mepụta "ele-milled view" nke akụkụ gị. A na-enye nkwupụta mkparịta ụka nke na-enye gị ohere ịtụle nhọrọ nke ihe dị iche iche na ọnụọgụ dị iche iche, yana ele 3D anya etu akụkụ akụkụ gị si arụ ọrụ ga-atụnyere nke mbụ gị na esemokwu ọ bụla gosipụtara. Lee nyocha ProtoQuote Ebe a.
Kedu ihe bụ CreateProto echekwara maka ịkpụzi?
Anyị na-ebupụta ụdị plastik na ihe igwe dị iche iche site na ABS, naịlọn, PC, na PP na igwe anaghị agba nchara, aluminom, ọla kọpa, na ọla. Hụ ndepụta zuru ezu nke ihe karịrị 40 maka ngwaahịa na ntụgharị. N'oge a, anyị anaghị anabata ihe ndị ahịa na-eweta maka ịkpụzi.
Kedu ihe ike ikeProto? Kedu ụdị akụkụ m nwere ike ịbụ?
Maka ozi na akụkụ akụkụ na ihe ndị ọzọ maka ịtụgharị na ntụgharị, biko lee ụkpụrụ nduzi na-egwe ọka ma na-atụgharị ụkpụrụ nduzi ndị ọzọ.
Kedu ihe kpatara m ga-eji jiri akụkụ m rụọ ọrụ karịa 3D edepụtara?
Ngwa akụrụngwa nwere ezigbo njirimara nke ihe ị họọrọ. Usoro anyị na-enye gị ohere ịnweta akụkụ nke igwe site na mgbochi nke plastik siri ike na ígwè n'otu oge, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ngwa ngwa, karịa akụkụ 3D.
Kedu ihe bụ ike nke ikeProto?
Anyị na-echepụta ụdị ọrụ na-arụ ọrụ na njedebe iji were ụbọchị 3.
Site imewe na n'ichepụta akpaaka, CreateProto bụ ike iji nweta àgwà mpempe akwụkwọ metal akụkụ gị aka n'ime ụbọchị.
Kedu ego nkịtị nke akụkụ mpempe akwụkwọ na CreateProto?
Ahịa dị iche mana ọ nwere ike ịmalite ihe dịka $ 125, dabere na akụkụ geometry na mgbagwoju anya. Zọ kachasị mma iji tụọ ụgwọ gị bụ bulite ihe nlere gị na webụsaịtị anyị iji nweta nkwupụta na-akwụghị ụgwọ n’ime awa. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ọnụ ọnụ na imewe ngwa ngwa maka nzaghachi ihe nrụpụta, budata tinye add-in eRapid maka Solidworks.
Kedu ka usoro ntinye akwụkwọ mpịakọta si arụ ọrụ?
Maka ngwa ahia ederede, ị ga-ebugo ụdị CAD na nkọwapụta gị na quote.rapidmanufacturing.com. You'll ga-enweta a zuru ezu see okwu n'ime awa. Ozugbo ị dị njikere ịtụ akụkụ, ịnwere ike ịbanye na myRapid itinye usoro gị.
Kedu ihe bụ ihe e kere eke na-ekepụtaProto maka mpempe akwụkwọ?
Anyị na-ebupụta ihe igwe dị iche iche gụnyere igwe anaghị agba nchara, aluminom, ọla kọpa, na ọla. Hụ ndepụta zuru ezu nke ngwaahịa maka ngwaahịa mpempe akwụkwọ.
Kedu ihe bụ ikeProto? Kedu ụdị akụkụ m nwere ike ịbụ?
Maka ozi gbasara akụkụ nke oke na ntụle ndị ọzọ maka ịkpụpụta igwe, biko lee ntuziaka ndị e ji igwe rụọ.
Gịnị bụ CreateProto 'injection ịkpụzi ike?
Anyị na-enye plastik na mmiri mmiri silicone roba ịkpụzi yana overmolding na fanye ịkpụzi na ala-olu ibu nke 25 na 10,000 + iberibe. Ahụkarị n'ichepụta oge na- 1 ka 15 ahịa ụbọchị. Injectionkpụzi nkedo na-enye aka na-enyere ndị na-emepụta ngwaahịa aka ị nweta ụdị nrụpụta yana akụkụ nrụpụta dabara adaba maka ịnwale ọrụ ma ọ bụ iji nke ikpeazụ n'ime ụbọchị.
Anyị emeela usoro nke ịkọpụta, imepụta, na ịkpụpụta ebuka dabere na ụdị akụkụ 3D CAD nyere ndị ahịa. N'ihi na nke a na akpaaka, na-agba ọsọ software na àjà ihe ọ ultraụ -ụ-ngwa ngwa compute ụyọkọ, anyị a na-ebipụ ndị n'ichepụta oge maka mbụ akụkụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ot ụzọ.
Kedu ụdị ọnụahịa nke akụkụ ndị ọzọ na-emepụta na CreateProto?
Ahịa amalite na $ 1,495, dabere na akụkụ geometry na mgbagwoju anya. Zọ kachasị mma iji tụọ ọnụ ahịa bụ bulite ihe nlere gị na weebụsaịtị anyị iji nweta nnabata mmekọrịta n'ime awa. Protolabs nwere ike ịmepụta ihe ị na-akpụzi na obere akụkụ nke ọnụahịa ntụtụ na-akpụzi n'ihi ngwanrọ nyocha nke onwe anyị, usoro akpaghị aka, na ojiji nke aluminom.
Inweta mkparịta ụka mmekọrịta ga-egosi ihe ma mechaa dị, gosipụta nsogbu ọ bụla nwere ike ịmepụta akụkụ gị, ma gosipụta nhọrọ ntụgharị ọsọ ọsọ na nnyefe dị (dabere na jiometrị gị). Ga-ahụ ọnụ ahịa pụtara ihe gị na ọtụtụ nhọrọ gị n’ezie — ọ dịghị mkpa ịkọghachi. Hụ ihe nlere ProtoQuote Ebe a.
Kedu resins m nwere ike iji (ma ọ bụ kwesiri) iji?
Ndị na-ese ihe kwesịrị ịtụle ihe gbasara ngwa ngwa dịka ike mgbagha, mmegide mmetụta ma ọ bụ ductility, njirimara igwe, ịkpụzi ihe na ụgwọ nke resin mgbe ị na-ahọrọ resin. Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka n'ịhọrọ ihe, biko nweere onwe gị ịkpọ anyị.
Kedu ihe bụ resinProto 'echekwara maka ịkpụzi ọgwụ?
Anyị nwere ihe karịrị 100 thermoplastic resins ma nakwere ọtụtụ resins ndị ahịa na-eweta. Lee ndepụta zuru ezu nke resins protolabs.
Maka ozi na akụkụ nha na ntụle ndị ọzọ maka ịkpụzi ọgwụ, biko lee ụkpụrụ nduzi anyị.
Kedu ihe kpatara m ga - eji zụta akụkụ kpụrụ karịa akụkụ 3D edepụtara?
Akụzi akụkụ site na Protolabs ga-enwe ezigbo njirimara nke ihe ị họọrọ. Site na ngwongwo nke ihe eji eme ihe na ime ka elu di elu, ihe ndi ogwu na-adabara maka ule oru na mmeputa ihe.
Gini bu ihe edeputara na CreativeProto?
Ntughari akwukwo a bu mgbanwe a choputara na geometry gi iji hu na mmebe gi na akwado ikike nke ngwa ngwa anyi.
Kedu ụdị faịlụ ị ga-ezitere m?
Ọ dabere na faịlụ isi. Na mkpokọta, anyị na-enye faịlụ STEP, IGES, na SolidWorks.
Ọ bụrụ na mgbanwe ahụ masịrị m, gịnị ka m kwesịrị ime?
Nwere ike ịzụta akụkụ ahụ ka egosiri ya na ntụgharị ederede ọ bụrụ ma:
enweghi mgbanwe agbanwe agbanwe achoghi.
ị nabata ndegharị ahụ site na ịlele igbe dị na ngalaba nke atọ nke see okwu.
Ọ bụrụ na mgbanwe ahụ masịrị m mana ịchọrọ ịtụ site na faịlụ m, gịnị ka m ga-eme?
Melite ihe nlere gi ka o dabaa na ideghari ederede ma weghachite ya:
Pịa bọtịnụ 'Download Revised Model' na ngalaba nke abụọ nke see okwu iji tụnyere geometry Protolabs na ụdị nke mbụ gị.
Gbanwee mgbanwe ndị egosipụtara na Protolabs na ngwa ọrụ ntanye gị ma weghachite akụkụ gị maka nkwupụta. Ikwu okwu ọzọ chọrọ site na usoro anyị iji hụ na egwuregwu dị n'etiti ọnụego na akụkụ ahụ.
A ghaghachitere emelite ekwuputara na enweghi mgbanwe a choro ma ya mere, akuku gi kwesiri ibu oke.
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na mgbanwe a anaghị amasị m (ma ọ bụ enweghị ike ịnabata)?
Enwere ike idozi nsogbu esemokwu n'ọtụtụ ụzọ. Ị nwere ike:
gbanwee akụkụ gị geometry n'ụzọ dị iche iche iji mezuo ebumnuche nke edepụtara.
kwurịtara azịza ndị ọzọ site na ịkpọtụrụ injinia ngwa na + 1-86-138-2314-6859 ma ọ bụ ahịaervice@createproto.com.
Kedu otu m ga-esi chọpụtakwuo ihe kpatara ị jiri mee mgbanwe ahụ?
Iji tụlee usoro achọrọ, kpọtụrụ injinia ngwa na + 1-86-138-2314-6859 ma ọ bụ ahịaervice@createproto.com.
Enwere ụgwọ ndị ọzọ? Gịnị bụ ọnụ ahịa nke ọrụ a?
A na-enye ndegharị ndị a na-akwụghị ụgwọ ọzọ. Geometry a na-emezigharị ọnụ dị ka akụkụ ọ bụla ga-abụ. Mgbanwe ụfọdụ ga-emetụta ọnụahịa elu ma ọ bụ ala. Na omume, ọtụtụ ọnụahịa na-agbanwe site na obere nyochagharị geometry bụ ihe na-adịghị mma.
Nke a ọ bụ ọrụ nhazi?
Anyị anaghị enye ọrụ imepụta ngwaahịa. A na-enye ndegharị iji gosipụta geometry nke kwekọrọ na usoro nrụpụta anyị.
Kedu ihe kpatara eji gwa m ka mmelite protoviewer m?
Ntughari echiche a dakọtara na nsụgharị Protoviewer ọhụrụ.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na akụkụ m anaghị arụ ọrụ dabere na mgbanwe Protolabs?
Na-ahụ maka akụkụ imewe na ọrụ.
Enwere m ike ịpụ na usoro idegharị aha?
Anyị nwere olile anya na ịchọta ọrụ a bara uru, mana ọ bụrụ n'ịchọrọ isonye, ​​rịba ama ya mgbe ị buliri akụkụ gị.
Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services, Otito Prototyping na Manufacturing, CNC Rapid Prototyping, CNC Prototyping, Otito Prototyping, Fast Prototyping,